Dhigista Seeka, Dhismaha 21 Maamulaha shirkada William L. McKnight, uu la socda madaxa injineerada E.M. Johnson, waa uu kormeeray rakibaada dhagaxa isku xidhaha ah Oktoobar 1939. Dhismahu waxa uu u adeega William Murphy iyo Wiilka uu dhalay Shirkada…
Ka shaqayna Wanaajinta Shaqad Shaqaalaha badankooda Warshada Saint Paul waxay ka shaqeeyeen warashada oo waxay heleen mushahar saacadle ah. Shirkaddu waxay raadisay inay bixiso mushahar sareeya iyo xaalado shaqo oo la badbar dhigi karo shirkadaha…
“Waxaan doonaya inaan ka shaqeeyo 3M” Qaar badan oo shaqaalihii hore ee 3M, ay ka mid yihiin William L. McKnight iyo Archibald G. Bush, waxay lahaayeen tababar “ganacsi” ama tababar dugsi sare oo :”fanka makaanikada ah.” Markii William Viervering la…
Haween Jooga Shaqada Haweenku waxay ka shaqeeyeen 3M ilaa sanadaheedii hore oo waxay ka ciyaareen door muhiim ah xataa doorar kala duwan oo badan. Sanadkii 1916, sanadka sharikada la sameeyay macaashkeeda koowaad oo bixisay macaash qaybsiga…
Xabagta 3M Alaabta 3M waxaa loo isticmaalay isticmaalo cusub iyo kuwa kalana waa la sameeyay sidii qayb dedaalka dagaalka ah. In ka badan 100 nooc oo kala duwan oo xabagta “Scotch” ah ayaa la sameeyay oo la warshadeeyay si loo caawiyo wax soo saarka…
Dadka 3M Juulay 1941, 3M waxaa u shaqaynayay 3,133 shaqaale ah oo ku kala firidhsanaa 4 warshadood iyo 13 waaxood iyo bakhaaro. Waxaa joogay 1.639 shaqaale ah warshada Saint Paul, 372 xafiiska Saint Paul, iyo 143 shaybaadhka cilmi baadhida ee Saint…
“Thermo-Fax” “Dhammaan waxay ku bilaabantay marka qofka inuu gacmahiisa ka shaqaysiiyo la faro.” Markii Digtoor Carl S. Miller waxa uu samaynayeycilmi baadhida oo waxa uu qaaday qoraalada gacanta lagu qoro ee diktooraagiisa kimistariga xaga…
Mashiinada iyo Qalabka: Qayb muhiim ah oo Nidaamka Wax soo saarida ah 1928, 3M waxay ka dhistay dukaankeedii mishiinka ee u horaysay qaybta hoose ee Dhismaha 2. Saddexda makaani iyo kow iyo toban mashiinada wax ridqa ah ee mishiinada la sameeyay iyo…
3M CASRIYAYNTA WAX SOO SAARKA BAALEESKA Baaleeska: Sheekada Warqaddaha baaleeska 3m waxay bilowday warshadaynta alaab keliya, warqaddaha baaleeska ah, 1905 xaga warshadada Duluth. Warqadda baaleeska weli waxay ahayd alaabta keliya marka shirkadu ay u…
3M CASRIYAYNTA WAX SOO SAARKA XABAGTA Xabagta Sheekada Duubka xabagta Duubabka xabagta ee qiyaasta iyo xabagaynta ee cadaadiska xasaasiga ku ah waxaa lagu dahaadhaa xabag lagu dhejiyo xejiye debcsan. Shirkadu waxay u adeegsatay khibradeeda dahaadhka…
Bilwogii Fikrada Koboca 3M laga bilaabo bilowgeedii iska hooseeyay ee 1902 ilaa ay ka noqotay shirkad caalami ah waxaa sabab u ahaa himilada iyo dedaalka. Afarta shirkadood ee aasaasay waxay lahaayeen hiigsiga warshadaynta korondhamka si loogu…
Warshada iyo Ganacsiga 3M meeshada ku dhinactaal khadka tareenku maro waxaa ka xigay galbeed iyo koonfur suuqyada ganacsiga ee Arcade iyo East Seventh. Waxay ku taal bandhtanka bulsho madani oo horumaysay oo ku dartay warshada xaafadaha la dego ee…
Warshadaynta iyo Macdanta Minessota waxay ugu horayn sare u qaaday raasamaalka iyaddo ku iibinaysa $1 saamigiiba 1903. Sanadihii hore, waxay lama huraan ahayd faa’iido la’aan marka ay shirkaddu la halgantay. 3M waxay bixisay macaashiila qaybsanayay…